🥇 incwadi yokunikeza ingxelo yobugqirha bamazinyo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 330
Umboniso we-logbook wobalo lwamazinyo
Yenza iodolo yokungena kwengxelo yogqirha wamazinyo
Umntu ngamnye uye kugqirha wamazinyo ubuncinci kube kanye ebomini babo. Amaziko amatsha ezonyango avulwa kuyo yonke indawo - zombini izifundo ezahlukeneyo kunye noluhlu olukhulu lweenkonzo zonyango ezibonelelweyo, kwaye zikhethekileyo. Umzekelo, iiklinikhi zamazinyo kunye nonyango lwamazinyo. Kwenzeka ukuba amaziko anje ekungeneni kwemisebenzi yawo angacingi ngakumbi ngokugcina iirekhodi. Kukholelwa ukuba kwanele ukurekhoda nje amaxwebhu kunye nokugcina irejista yamazinyo. Ngelishwa, oku akuyonyani ngokupheleleyo. Mhlawumbi kwinqanaba lokuqala, le ndlela yokwenza ingxelo ilunge ngokwenene. Inani elincinci labathengi, amanani amancinci- zonke ezi zinto zichaphazela iindlela zeshishini (ukungenelela kwezigulana ngesandla kugqirha wamazinyo). Nangona kunjalo, ngokunyuka komthamo womsebenzi kunye nokukhula okuthandwayo kwamazinyo okanye elinye iziko lonyango, kunye nokukhula kwenani labathengi, ulawulo lwamazinyo lujamelene nombuzo onzima wesidingo sokwandisa iinkqubo zeshishini.
Isizathu soku kukusilela kwexesha lokuqhubekeka kwenani lolwazi elonyukayo, kuba oogqirha bamazinyo, abaqhele ukugcina iirekhodi ngesandla, ekuhambeni kwexesha bayothuka bakufumanisa ukuba endaweni yokwenza imisebenzi yabo ngqo, baya entloko ekugcwaliseni amaxwebhu . Umzekelo, gcwalisa iphepha labathengi okanye irejista ye-X-ray yamazinyo kwaye ucwangcise le mifanekiso ngokokungenisiweyo kwirejista. Imizamo yomphathi yokuqokelela ulwazi malunga neziphumo zemisebenzi yamazinyo ijika ibe yintloko yokwenene kubasebenzi bayo abaqhelekileyo. Indlela yokuphuma kule meko kukutshintshela kweklinikhi ukuya kwi-logbook ye-accounting. Eyona ncwadi ibalaseleyo yokubhalwa kwemali yokuphucula iinkqubo zeshishini zokugcina iincwadi zeekhompyuter zabathengi kunye neencwadi ze-X-ray kugqirha wamazinyo kwishishini kuthathelwa ingqalelo ngokufanelekileyo isicelo se-USU-Soft.
Uphuhliso lwethu luyisoftware yolawulo lobalo kwaye lusetyenziswa ngempumelelo ziinkampani zazo zonke iintlobo, kubandakanya neeklinikhi zamazinyo kunye neeofisi zamazinyo zokugcina iincwadi zekhompyuter zabathengi kunye nerejista yemifanekiso yeX-reyi kunyango lwamazinyo. I-USU-Soft ayaziwa kuphela kwiRiphabhlikhi yaseKazakhstan, kodwa nakwamanye amazwe. Ukusebenza kwencwadi yokubhalwa kwemali ye-USU-Soft yokugcina irejista yezigulana kwahluke kakhulu, kwaye ujongano lukulungele. I-logbook ye-accounting ye-dentistry ingasetyenziswa ngumntu onalo naliphi na inqanaba lezakhono zekhompyuter. Isicelo sokunikwa kwengxelo se-USU-Soft sinceda ukugcina i-logbook ye-elektroniki yezigulana zamazinyo kwaye ikhulule abasebenzi bamazinyo kwisidingo sokugcina umthamo omkhulu wamaxwebhu ephepha, kunye nawo wonke umsebenzi okruqulayo nowesiqhelo kubo, ubakhululela ixesha ukusombulula iingxaki ezibaluleke ngakumbi. Apha ngezantsi sizisa ingqalelo yakho kwiimpawu ezimbalwa zencwadi yokubhalwa kwengxelo usebenzisa umzekelo wesoftware yokugcina i-logbook ye-elektroniki yezigulana kunye nencwadi yemifanekiso ye-X-ray kugqirha wamazinyo.
I-USU-Soft logbook logbook yamazinyo ibalulekile kubaphathi. Ngayo unokulawula ngokupheleleyo umsebenzi wamazinyo. Uyazi ukuba yiphi ingeniso ugqirha ngamnye azisa nayo, kunye nokusebenza kakuhle kwabalawuli. Ufumana ithuba lokukhangela amanqaku awomeleleyo kunye nabuthathaka emsebenzini weengcali: ukubonisana kwazo kungaguquki kunyango njalo njalo. Uhlalutyo lwabo bonke abasebenzi abanobukrelekrele bokuzenzela kunye nokwazisa ngotshintsho olukrokrisayo aluyi kukuvumela ukuba uphulukane nolawulo kwimisebenzi eyenzeka kugqirha wamazinyo. Awudingi ukubala imivuzo yabasebenzi bakho ngokwakho. Isicelo siwulungele ngokufanelekileyo umsebenzi ngenxa yomnqweno wokwenza iimpazamo zero. Ngaphaya koko, unokuqikelela umthwalo womsebenzi wamazinyo kwaye wabele abaguli kunye nabasebenzi ngokufanelekileyo ukuze uqiniseke ngokusebenza kakuhle kwamazinyo.
I-USU-Soft logbook logbook yolawulo lwamazinyo ngowona mhlobo ubalaseleyo kubalawuli. Ukuba ulawula iishedyuli zakho zamazinyo ngokulula nangokufanelekileyo, ke uqinisekile ukuba kwenzeka ntoni kugqirha wamazinyo kwaye oku luphawu lolawulo nocwangco. Ngaphandle kwalonto, unokukhangela ixesha lasimahla kunye ne-logbook ye-accounting yolawulo lombutho wamazinyo kwaye urekhode abaguli ngokufanelekileyo njengoko kunokwenzeka. Ewe, isicelo sikhawulezisa iphepha. Ukuba neetemplate esele zenziwe kunciphisa ixesha lenkonzo yesigulana kwaye kunciphisa iimpazamo ezinokwenzeka. Ukuprinta ii-invoyisi kunye nokwamkela intlawulo kunyango olunikiweyo kunokwenziwa kanye kwi-logbook accounting. Emva kwexesha elithile lokusebenza, uqinisekile ukuba uqaphele ukonyuka kwemali yakho. Siyazi ukuba wena neengcali zakho zentengiso nazi iindlela ezininzi zokunyusa ingeniso yenkampani ngezixhobo zentengiso kunye notshintsho ekusebenzeni. Incwadi yokubhalwa kwemali iyazifezekisa ezi ndlela. Umzekelo, ukubhaliswa kwi-Intanethi kusindisa ixesha kunye neerhafu zezigulana.
Oku kunika amandla kwi-karma yakho yamazinyo kunye nenani lokusebenza nge-logbook ye-accounting. Izaziso zokutyhala kwi-app yeselfowuni kunye neeleta zeendaba zikugcina unyawo olufutshane kunye noogqirha kunye nezigulana: ubakhumbuza ngokwenyusa kunye nezaphulelo, ukuhambisa iindaba, kunye neenkqubo. Inkqubo yebhonasi yonyusa ukuthembeka kwabathengi kwaye ikukhuthaza ukuba uthathe amanyathelo ajolise ngakumbi. Inkqubo yokuthunyelwa ikuvumela ukuba utsale izigulana ezitsha ngamanani amakhulu ngeendleko ezincinci. Sikunika ithuba lokufezekisa iminqweno yakho yokuzisa umbutho owulawulayo kwinqanaba elitsha lempumelelo!